CHERRY QALALAN - FAA'IIDOOYINKA IYO DHIBAATADA. SIDA LOO QALAJIYO JEERIGA EE QALABKA KORONTADA IYO FOORNADA? - WIXII MARTIDA
Sida loo qalajiyo jeeriga guriga: ee eletrosushilka iyo foornada?
Gundhigyada qalalan waxay leeyihiin waxyaabo badan oo faa'iido leh. iyo hababka codsiyada, laakiin cid kastaa way ogyihiin. Inta badan annaga ayaa caadeysnaa in la isticmaalo khudradda cherry for pies, pies iyo suxuunta kale.
Laakiin cherry qalalan waa hab aad u haboon ee ilaalinta, iyo dhadhanka noqon doonaa sida wanaagsan. Halkan waxaan ka hadli doonaa sida loo qalajiyo jeeriga si loo ilaaliyo ugu badnaan vitamiin iyo dhadhanka dhirta la qalajiyey. Sida loo qalajiyo jeeriga guriga, akhriso maqaalkan.
First of dhan, waa in la sheegay in inta lagu guda jiro qalajinta, haddii wax kasta oo si sax ah loo sameeyo, cherry ficil ahaan ma lumiso hantida faa'iido leh. Berry Tani waa mid hodan ku ah vitamiin iyo macdan. Waxay leeyihiin guryaha bakteeriyada, sidaa darteed in daawada dhaqameed qalalan inta badan waxaa loo isticmaalaa in la joojiyo geedi socodka nabarrada, iyo sidoo kale cudurada viral.
Sidoo kale, jeeriga la qalajiyey ayaa hodan ku ah walxaha si weyn u yareeya xinjirta dhiigga. Qalabkaas dartiis suxuunta laga bilaabo jeeriga la qalajiyey waxaa lagu talinayaa in loo isticmaalo sidii prophylactic ah ka hortagga atherosclerosis.
Sidoo kale haddii qofku qabo dhiig yaraan, cherry noqon doonaa mid aad u faa'iido leh. Waxaa jira bir badan oo birta ah ee berrigan, waxaa la barbar dhigi karaa tufaaxa qaddarka walaxdan.
Fiitamiinada ku jira geedka qallalan: C, B1, B6. Sidoo kale in ka kooban ee berry waa magnesium, cobalt, iwm. Cilmi-baadhayaashu waxay xaqiijiyeen in Isticmaalka badanaa ee cherry ayaa ka hortageysa unugyada kansarka. Geedka la qalajiyey waa jahawareer xoog leh, sidaa daraadeed haweenka uurka leh waxay inta badan isticmaalaan berry iyo qashinka.
Haweenka ku jira booska cherry, waxay sidoo kale faa'iido u leeyihiin maadada sare ee birta, taas oo inta badan ka maqan dhiigga haweenka uurka leh. Waa faa'iido leh in la cabbo compote ka soo jeeriga qalalan leh suuxdin.
Cherry si xun u saameeyaa xaaladda ciddiyaha, timaha iyo maqaarka.
Waxaad ka hadli kartaa wax badan oo ku saabsan faa'iidooyinka cherry Qaar waxay u arkaan inay ku dhow dahay argagax. Isticmaal berriqada hababka caanka ah ee daaweynta, is-qurxinta, kariska.
Sidaas, jeeriga ayaa inta badan faa'iido leh. Aan ka hadalno habka geeddi-socodka ee hagaagsan ayadoo laga mahdinayo berrito.
Miisaanka luminta. Geedka la qalajiyey waa qayb ka mid ah cuntooyinka badan. Muuqaal kala duwan ee berrigan ma aha oo kaliya ma keeno waxyeello jirka, sida cuntada caadiga ah, laakiin sidoo kale xoojinta nidaamka difaaca.
Caadinta hurdo la'aanta. Sababtoo ah xaqiiqda ah in berry cherry ku jira melatonin, ka kooban iyaga oo ka caawinaya hagaajinta hurdada. Si aad u yar, tani waxa ay fududeyneysaa pies iyo suxuunta kale ee johnta, maadaama aad tahay inaadan kugu filneyn inaad seexato ka hor wakhtiga jiifka.
Horumarinta xasuusta. Naftaada baro subax kasta si aad u cabto koob quruxsan oo khudradeed, waxay si weyn u hagaajineysaa diiradaada iyo xusuustaada.
Xawaarida geedi socodka gabowga. Cilmi-baadhayaashu maaha kuwo u muuqda aragti aan caadi ahayn, laakiin cilmi-baaris ka dib, qaar badan oo bayoolaji ah ayaa soo gabagabeeyay in geedka la qalajiyey iyo kuwa cusubi ay qayb ka yihiin cusboonaysiinta unugyada maqaarka.
Marka lagu daro tiro badan oo macdan ah Cherry waxay leedahay dhadhan cajiib ah. Haddii aad leedahay carruur qoyskaaga ah, waxay xaqiiqdii jeclaan doonaan raaxadaas.
Galeenta qalalan ee Kalorie waa 292 kcal halkii 100 g oo ah badeecada, haddaba ha ka baqin inaad ka soo kabsato isticmaalka noocan oo kale ah.
Giriigta la qalajiyey faa'iido iyo waxyeelo akhris ah.
Waa kuwan faa'iidooyin badan oo ah cherry Si kastaba ha ahaatee, berry cas oo cusub waa cusub., iyo foomka la qalajiyey waxay noqon kartaa waxyeello. Waa maxay khatarta ah ee cherry jecel?
Cherry waa ka horjeeda:
dadka qaba cudurka macaanka;
carruurta ka yar 1.5 - 2 sano;
oo leh cudurrada nidaamka dheef-shiidka.
Cherry waxaa ku jira xaddi badan oo ah gulukoos.Sidaa darteed, haddii aad qabtid sonkorta dhiigga oo sareysa, waxaa fiican inaad iska ilaaliso cunista jeeriga.
Ma'aha lagama maarmaan in qorraxdu la qalajiyo jeeriga, waxay ka xanaajin kartaa jilicsanaan xoog leh.
Sida loo qalajiyo jeeriga leh dhagaxyo dheeraad ah.
Cunniska la qalajiyey ee Cherry ayaa akhriya. Cherry waa mid aad u faa'iido leh, laakiin dhadhanka ayaa sidoo kale muhiim u ah noo. Dhadhanka jiilka la qalajiyey wuxuu ku xiran yahay inta badansida aad u soo qaadatay berry. Aynu ka hadalno noocyada nooca loo baahan yahay.
Marka aad dooranaysid jeeriga qalajinta First of dhan, fiiro gaar ah u berry bislaado ee midab taajir ah.. Jidhka miraha cayayaanka ahi waa inuu noqdaa mid cufan, lafuhuna waa inuu yaryahay. Noocyada jeeriga, oo ku habboon qalajinta, waa Shubinka, Lyubskaya, Vladimirovskaya.
Ka hor intaanad si toos ah ugu socon nidaamka qalajinta, waxaad u baahan tahay inaad go'aansato qaybta soo socota - Ma u baahan tahay lafo? Haddii aad rabto inaad isticmaasho cherry ee lagu kariyo karinta, waxaa suurtagal ah in laga tago lafta.
Haddii berry la isticmaali doono sida buuxinta bakteeriyada, lafaha waa in laga saaraa. Dukaamada oo leh alaabta jikada ee kala duwan Hadda waxaad ka heli kartaa qalab gaar ah oo laysaga saaro lafaha aad u fudud.
Intaa waxaa dheer, iyadoo la adeegsanaayo qalab noocan oo kale ah waxaad ka dhigeysaa si taxadar leh, waa mid aad u muhiim ah in aan waxyeelo berry ah si aysan u dhacin casiir, iyo siin qoyaan dheeraad ah inta lagu jiro qalajinta.
Si lafaha loo dhigo si fudud looga saaro, si fudud u qalaji jeeriga heerkul ah 30-35 digrii. Jardiinka qalajinta ee qalajiyaha korantada (qalajiyaha), wax badan oo ka dambeeya.
Ka hor inta nidaamka qallajinta guga waa in ay xalliyaan iyo xor ka ah cawska miro, si fiican u dhaq. Si aad u berry si aad u qalajiso dhakhso ah, ka hor inta qalajinta, waxay barafaysan ee xal karkaraya lye 2-3 daqiiqo.
Ka dib markii waxtarkaas, cherry ayaa bilaabi kara in ay qalalaan. Sida loo qalajiyo jeeriga ee foornadaSida loo qalajiyo jeeriga korriinka korantada waxaad sii baran doontaa.
Hadda waa wakhtigii wax laga qaban lahaa sida loo qalajiyo jeeriga. Aad bay muhiim u tahay inaad sameyso si aad u ogaato dhammaan guryaha ku haboon ee kor ku xusan.
Qalalan qallalan qorraxda qorraxda - iyo sababta aan u lahayn? Waxa ugu wanaagsan in la qalajiyo berry ee hawada cusub.halkaasoo ay ku ordi doonaan jilbaha diiran. Qaar badan ayaa isticmaala baayacmushtarka ama taraamyada ujeedooyinkaas, laakiin waxa fiican inaad qaadato maro weyn oo dhar nadiif ah.
Berryaha qalalan wuxuu u baahan yahay 4-5 maalmood. Inta lagu jiro maalinta, waa in ay ahaadaan qorraxda, iyo habeenkii sameeyaa berry ee gurigasi aanay mar dambe u qoyin. Sida ugu dhakhsaha badan ee aan ku bilaabi karno qorraxda aroortii, johanneselka ayaa u baahan in mar kale la soo saaro. Qaado nooc ka mid ah dharka oo aad ku raaxeysan karto inaad xirato, ama aad isticmaasho qof caawimaad ah.
Waxay qallajineysaa hawada cusub ee haysa qashinka fitamiinada ugu badan ee la qalajiyey. Laakiin habkani qalajinta wuxuu ku haboon yahay oo kaliya jiiliyada leh dhagaxyo.
Haddii aad baabi'iso lafaha, casiir ka soo johannesel aad u soo bixi doonaa, taas oo si weyn u soo jiidata cayayaanka in aadan ka takhalusi kartaa.
Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la qalajiyo jeeriga ee qoraxda. si buuxda oo buuxda. Sida loo qalajiyo jeeriga guriga, sida loo qalajiyo jeeriga ee foornada dheeraad ah.
Si habsami ah si aad uhesho jeeriga guriga, waxaad u baahan tahay foorno naxaas ahDabcan, cherry ma engegi doonaa heerkulka qolka. Ka hor inta aadan bilaabin qalajinta berry ah ee foornada, waa inaad ka saarto dhammaan jeeriga waxyeeloobay.
Si aad u qallajin jeeriga guriga, waxaad u baahan tahay inaad berry ka dhigo xaashi dubistadaboolay warqad xoqan ama foormo. Qallajintu waxay dhacdaa dhowr marxaladood, taas oo ku kala duwan xaaladaha heerkulka.
Mar walba waxaa jira su'aalo badan oo ku saabsan diyaargarowga. Go'aaminta in cherry la qalajiyey markii la sameeyo hawada furan waa mid fudud, tan iyo markii kiiskan ma jiro cabsi ah in la qalajiyo berry.
Haddii aan ku engegeyno foornada, waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto xaqiiqda ah marka aad fartaada ku cadaadineysid fartaada, casiirku kama soo baxo. Madow mugdi ayaa sidoo kale ku jira geedka si fiican loo qalajiyey. maqaarka maqaarka. Dhadhanka berry ah oo la qalajiyey waa macaan iyo dhanaan.
Geeddi socodka guud ee geedka qallalan ee guriga ayaa qaadan doona qiyaastii 8-9 saacadood.Waxay ku xiran tahay xajmiga berry iyo xajmiga jirkooda. Haddii aad u baahato in aad qallajiso geedka jilicsan, geedi socodku wuxuu soconayaa laba ama saddex jeer muddo dheer.
Ha iloowin inaadan ku dabooli karin foornada leh jeeriga, inta lagu guda jiro hawsha karinta waa inay ahaato mid khaldan.
Si loo qalajiyo jerriga ee foornada dhabta ah, marka hore waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso heerkulka. Si tan loo sameeyo, ku dar dhawr dhibcood oo biyo ah dabaqa foornada., waa in la kariyaa. Habka loo qallajiyo berry ee foornada dhabta ah waa mid fudud, inta badan habkan gerriga ayaa la qalajiyaa guryaha waddanka ama guryaha waddanka.
Ka dib markii shaashadaha la rakibo, foornadu uma baahna in la xiro si adag, waa inay jirtaa helitaanka hawada, sababtoo ah qoyaanku waxay u baahan doonaan inay uumi baxaan. Tani waa nuance aad u muhiim ah.taas oo aan shaki ku jirin in la tixgeliyo. Xaydhku waa inuu sidoo kale ujiraa.
Waqti ka dib, shooladda waa in si tartiib tartiib loo xiro. Xaaladahaas oo kale, geedka qallalan wuxuu soconayaa 10-12 saacadood.. Sida loo xafido qoyaanka qalalan guriga, akhriya qaybta soo socota.
Waxaa ugu wanaagsan in la xafiddo jeeriga la qalajiyo ee bacaha yar yar.
Haddii aad ogtahay inaad si deg deg ah u isticmaasho miro qallalan, waxay ku ridi kartaa weelka.
Geeddi dhigo foomka la qalajiyey noqon karaa wax ka badan hal sano, laakiin waa mid aan macquul ahayn in aadan cuni doonin ama aadan karin wax fiican dhadhan intii lagu jiro waqtigan.
Marka lagu daro habkan kaydinta ee jeeriga, inta badan loo isticmaalo sida fadhiisin iyo qalajinta.
Dhib ma yeelan doontid qalajinta geedka haddii aad raacdo taladayada. Gerriga qalalan ayaa ku farxi doona waqti dheer Qoyskaagu wuxuu leeyahay dhadhan fiican oo urta xagaaga.